Al-Shabaab oo sheegay in ay ku dileen 27 askari weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku dhow Kismaayo - Puntland Mirror Believable Media Website
[ May 12, 2021 ] Maxkamada ciidamada Puntland ee gobolka Mudug oo dil toogasho ah ku xukuntay shan xubnood oo katirsan Al-Shabaab	Somalia
[ May 12, 2021 ] Hal qof oo ku dhintay daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da’ay Puntland	Puntland
[ May 10, 2021 ] Sideed qof oo ku dhimatay qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho	Somalia
[ May 6, 2021 ] Madaxweyne Deni oo qaabilay madaxa xafiiska Qaramada ee Puntland	Puntland
HomeSomaliaJubalandAl-Shabaab oo sheegay in ay ku dileen 27 askari weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku dhow Kismaayo
Al-Shabaab oo sheegay in ay ku dileen 27 askari weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku dhow Kismaayo
July 23, 2018 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Al-Shabaab oo sheegay in ay ku dileen 27 askari weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku dhow Kismaayo. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaalyaano katirsan ururka Al-Shabaab ayaa weeraray saldhig ciidan oo kuyaala koonfurta Soomaaliya, waxayna dileen 27 dagaalyahan, sida ay sheegeen Al-Shabaab maanta oo Isniin ah.
Weerarka ayaa daba socda weerarkii bishii June ee saldhiga ay Al-Shabaab ku qaadeen kaasoo ay ku dhaawacmeen todobo askari.
Ma jirto wax hadal ah oo dhaqso uga soo baxay masuuliyiinta dowladda oo ku saabsan weerarka saldhiga Baar Sanguuni, oo qiyaastii 50 kiilomitir masaafo dhan u jira magaalo xeebeedka Kismaayo.
“Marka hore waxaan ku weerarnay qarax gaari kadibna waanu qabsanay,” Cabdicasiis Abu Muscab, oo ah afhayeenka howlgalada ciidamada ee Al-Shabaab, ayaa sidaa u sheegay wakaalada wararka Reuters.
“Waxaanu dilnay 27 askari waana qabsanay saldhiga. Qaar katirsan askarta ayaa u baxsaday keymaha,” ayuu ku sii daray.
Ciidamo milatari ah ayaa xoojin ahaan loogu diray saldhiga kadib weerarka, sargaal ayaa sidaa sheegay.
“Waxaanu u dirnay xoojin saldhiga,” Maxamuud Aadan, oo ah sargaal katirsan ciidamada milatariga Soomaaliya kuna sugan magaalada Kismaayo, ayaa sidaa u sheegay Reuters.
“Waxaanu ognahay in uu jiray qarax iyo dagaal culus oo u dhaxeeya Al-Shabaab, kuwaasoo saldhiga weeraray, iyo ciidamada Soomaaliya. Ma heyno faahfaahin ilaa iyo hadda.”
Dadka deegaanka ee magaalada Jamaame, oo qiyaas ahaan 70 kiilomitir u jirta Kismaayo, ayaa sheegay in ay maqleen qaraxa, oo ay ku xigay rasaasta qoryaha.
“Waxaanu maqalnay qarax weyn kadib salaadii subax kadib. Kadibna waxaa ku xigtay is-weydaarsiga rasaas culus. Waxayna ahayd dhanka Baar Sanguuni,” Cumaan oo kamid ah dadka deegaanka ayaa sidaa u sheegay Reuters.
August 6, 2016 Madaxweynaha dowlada Puntland oo Muqdisho kula kulmay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya
November 10, 2016 Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh oo duqeeyay saldhig tababar oo ay Al-Shabaab ku leedahay gobolka Jubbada Dhexe
September 22, 2018 18 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay meel u dhow Kismaayo
August 1, 2017 Puntland oo u dabaaldegaysa maalinta sanadguuradeeda 19-aad
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo amar ku bixisay in bil gudaheed lagu soo dhiso golayaasha deegaanka ee Garoowe iyo Boosaaso
Al-Shabaab says it storms military base near Kismayo, kills 27 troops
Hal qof oo ku dhintay daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da’ay Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo 24-kii saac ee lasoo dhaafay ka da’ayay gudaha Puntland ayaa hal qof ku dilay gobolka Nugaal, sida dadka deegaanka ay u sheegeen bog-wareedka Puntland Mirror. Roobabka [...]
Madaxweyne Deni oo qaabilay madaxa xafiiska Qaramada ee Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta xafiiska ku qaabilay Guy Griffin oo ah madaxa xafiiska Qaramada Midoobay ee Puntland. Kulanka madaxweynaha iyo madaxa Qaramada Midoobay ayaa diirada lagu saaray arrimaha Puntland iyo [...]
Madaxweynaha dowladda Puntland oo u jeediyay beelaha ku diriraya magaalada Buuhoodle in ay joojiyaan colaada
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo ku sugan dalka Sucuudi Caraabiya si uu guto acamaasha xajka ayaa u jeediyay beelaha ku diriraya gudaha magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn in ay joojiyaan colaada. [...]
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo cambaareysay markab dhuxul ka qaaday dalka oo gaaray Ciraaq
Muqdisho -(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay markab sida dhuxul laga keenay Soomaaliya oo tagay dalka Ciraaq. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cusmaan ayaa warbaahinta u sheegay in markabka oo ka [...]